မန္တလေးသူတွေရဲ့ "ဖင်ကြားညို ပြဿ နာ"... စိတ်မဆိုးတတ်မှ အပြည့်အစုံဖတ်ကြည့်နော်.. - APANNPYAY
Home / ရယ်စရာများ / မန္တလေးသူတွေရဲ့ "ဖင်ကြားညို ပြဿ နာ"... စိတ်မဆိုးတတ်မှ အပြည့်အစုံဖတ်ကြည့်နော်..
မန္တလေးသူတွေရဲ့ "ဖင်ကြားညို ပြဿ နာ"... စိတ်မဆိုးတတ်မှ အပြည့်အစုံဖတ်ကြည့်နော်..
Apann Pyay 8:50 AM ရယ်စရာများ Edit
မန္တလေးသူတွေ ဖင်ကြား ညိုလို့..စိတ်မဆိုးတတ်မှ အပြည့်အစုံဖတ်ကြည့်နော်..
ရဘူးနော် . . . .ခ်ခ်ခ်( စာရေးတဲ့သူ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေးတတ်ပုံများ)
"ဖင်ကြားညို ပြဿ နာ"
ဒီရက်ပိုင်းက ပြဿ ဒါးလွတ်ပုံ မရဘူး။
ဘာစာရေးရေး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿ နာလေးတွေနဲ့။
'မန္တလေးသူ ဖင်ကြားညို'... လို့။
အဲ့ဒါကိုဗျာ မန္တလေးသူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီး ရန်လုပ်တယ်... ...
"ဦးသန်ရာ... မန္တလေးသူဖင်ကြားညိုလို့တော့ သိမ်းကြုံးမပြောသင့်ပါဘူးဗျာ"
"ဟာ... သိမ်းကြုံးမပြောမိပါဘူး၊ ကိုယ့်လူကိုယ် ပြောတာပါ''
"ကဲ ဒါဆို ငါမေးမယ်၊ ကြမ်းပြင်ပေါ် တင်ပြင်ခွေပြီး အကြာကြီးထိုင်ရင် ခြေမျက်စေ့တွေ ဘာဖြစ်တတ်လဲ ဖြေ''
"ညို မဲ လာတာပေါ့ဗျ'''
"အေး... နောက်တခုမေးမယ်၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒူး ခဏခဏထောက်ရတဲ့သူတွေရဲ့ ဒူးက ကြာလာရင် ဘာဖြစ်မလဲ''
"ဟုတ်ပြီ... ထပ်မေးမယ်၊ တချို့မိန်းကလေးတွေ ခြေဖနောင့် အထက်နားမှာ ဘာလို့ မဲမဲအကွက်လေး ဖြစ်နေတာလဲ''
"သူ့ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်က ကြိုးနဲ့ ပွတ်မိလို့ပေါ့ဗျ''
"မှန်တာပေါ့... ကဲ မြန်မာပြည်မှာ မန္တလေးက စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် အများဆုံး စီးတယ်ဆိုရင် နင် ငြင်းမလား''
"အာ့ဆို... စက်ဘီးထိုင်ခုံနဲ့ အမြဲပွတ်တိုက်နေတဲ့ ဒို့ မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ ဖင်ကြားမှ မညိုရင် ဘယ်သူညိုမလဲ ကဲ''
"ဟာဗျာ... မသိဘူးဗျာ... ဘယ်သူညိုညို ကျနော်မညိုဘူးဗျာ... '
"ညည်း သေချာလို့လား အေ့''
"သေချာတယ်ဗျာ... ခင်ဗျားကြီး လူယုတ်မာကြီး၊ အကုန်လျှောက်စဉ်းစာနေတာ၊ တောက်စ်... မမြင်ဖူးဘဲနဲ့ကို မှန်အောင် ပြောနိုင်တာ၊ ရှက်တယ် ရှက်တယ် ဟင့် ဟင့်''
အဲ့ကလေးမလည်း ဖင်ကြားညိုကိစ္စကြောင့် လောကီကို စိတ်ကုန်ပြီး သီလရှင် ဝတ်သွားရှာတယ်
တရက်က ဘယ်ခြေထောက် အရမ်းကိုက်နေလို့ ရုံးလစ်ပြီး ထိုင်းမာဆတ်မှာ သွားအနှိပ်ခံတယ်။
ကိုယ့်နှိပ်ပေးတဲ့ မိန်းကလေးက ကိုယ့်ကို သိနေတယ်... ....
"ဦးက ဦးသန်၎ကို မလား''
"သမီးနဲ့က ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဖရန့်လေ''
""အော်... အေး အေး...၊ ငါ ဒီကိုလာတယ်လို့တော့ ပို့စ်မတင်နဲ့နော်''
"ဟုတ်ကဲ့ပါ... ဦးတို့က ဘာလို့ခုထိ မယူသေးတာလဲ''
"သူက သူ့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ရှုပ်နေတာလေ၊ သူ အကယ်ဒမီမရခင် လက်မထပ်ချင်သေးဘူးဆိုလို့ စောင့်နေရတာ''
"အော်... ဦး ချစ်သူက ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါ့''
"ဖွီးစ်စ်... အဟုတ်မှတ်လို့ နားထောင်နေတာ၊ အနောက်သန်တယ် ဦးက''
"ဒါနဲ့ ဦးကို ကြုံလို့ မေးအုံးမယ်"
"မန္တလေးသူတွေက ဘာလို့ ဖင်ကြားညိုတာလဲဟင်..."
အင်း... ဒီကိစ္စက မပြီးသေးပါလား ဒုက္ခပါပဲ
ဟိုနေ့က မယ်သီလရှင် ဝတ်သွားတဲ့ ကလေးမကို ရှင်းပြသလိုပဲ သူ့ကို ရှင်းပြလိုက်တယ်။
"... ... အဲ့လို စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် စီးတာများလို့ ညိုတာအေ့၊ မဟုတ်ပါဘူးငြင်းရင် ညာတာ''
"အင်း... အဲ... ဦးကလည်း ရှက်စရာကြီး''
"ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါ သဘာဝပါ၊ ဒါနဲ့ ညည်းကရော ဘယ်မြို့ကလည်း''
"ဘယ်မြို့ကလည်း မေးတာအေ့၊ ညည်းကို လမ်းလျှောက်သလား စက်ဘီးဆိုင်ကယ် စီးသလား မေးနေတာမဟုတ်ဘူး''
"သမီးမြို့ကိုသိရင် သမီးစက်ဘီးဆိုင်ကယ် စီးတာ သိမှာပေါ့၊ အာ့ဆို ဦးက သမီးကို သမီးကို ဟိုဒင်းညိုတယ်လို့ တွေးနေမှာ..''
"ခက်ဖူးလား၊ ညည်းဟာက အန္တရာယ်ကို ကြိုမြင်လိုက်ပုံများ ဟိုပုံပြင်ထဲက သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ သူ့နပ်စ်မလေးလို ဖြစ်နေပြီ''
ဒါနဲ့ သူ့ကို ပုံပြင်ပြောပြရတယ်။
ကြားဖူးနားဝပါ ဘယ်သူက မူရင်းလဲတော့ မသိတော့ပါဘူး။
တခါက သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။
မွေးလူနာတွေ ကလေးမွေးပြီးရင် မိန်းမကိုယ် မွေးလမ်းကြောင်းကို ပြန်ချုပ်တဲ့အခါတိုင်း... ဆရာဝန်ကြီးက ထမကြည့်ဘဲနဲ့ သူ့နပ်စ်မလေးကို ခိုင်းသတဲ့... ..
"ဆရာမရေ... နံပတ် ၁ မွေးလူနာကို ၃ ချက် ချုပ်လိုက်ပါ''
"ဆရာမရေ... နံပတ် ၂ မွေးလူနာကို ၂ ချက်ပဲ ချုပ်ပါ''
"ဆရာမရေ... နံပတ် ၃ မွေးလူနာကိုတော့ ၆ ချက် ချုပ်ပါ''
ဒါနဲ့ နပ်စ်မလေးက မေးတယ်... ...
"ဆရာရယ်... မွေးလူနာကို ထတောင်မကြည့်ဘဲနဲ့ ဘယ်နှချက်ချုပ်ပါလို့ ဆရာကပြောတယ်၊ ပြောတဲ့အတိုင်း ကျမချုပ်လိုက်တာ ကွက်တိချည်းပါပဲ၊ ဘယ်နှချက်ချုပ် ရမယ်ဆိုတာကို ဆရာ ဘယ်လိုများ သိလဲဟင်...''
"လွယ်ပါတယ် ဆရာမရယ်... သူ့ပါးစပ်ကို ကြည့်ပြီးပြောတာပါ၊ တိုက်ရိုက်အချိုးတူတယ် ဆရာမရဲ့''
ဆရာမလေးခများ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ နူတ်ခမ်းကိုချွန် ပါးစပ်ကိုစိပြီး ပြောသတဲ့... ....
"ဟွန့်... ချရာကရဲ... ဟုရဲဟုပဲနဲ့''
ဆရာမလေးက နူတ်ခမ်းထူထူကလေးနဲ့ ဆိုကိုး...
"ဟီး... ဟီး... ဦးကလေ... တကယ်ပဲတော့်''
"ညည်းလည်း ကလေးမွေးရင် အဲ့ဆရာဝန်ဆီ မသွားနဲ့''
"အမလေး... ကလေးမွေးဖို့မပြောနဲ့ ရည်းစားတောင် မရှိသေးဘူး''
"တကယ်ပြောတာ... ဦး တပည့်တွေထဲက ချောထောတော် ရှိရင် စပ်ပေးအုံး''
"ဦးကလည်း ပိန်းလိုက်တာ၊ ရုပ်ချော ငွေထော ပညာတော် တဲ့လူလေ''
"အော်... အဲ့လို ချောထောတော်တော့ မရှိဘူး... မာ၊ ကြီး၊ ရှည် တွေတော့ ရှိတယ် ယူမလား''
"ဟင့်... ကြောက်စရာကြီး မယူုချင်ပါဘူး''
"ဟဲ့... လိမ်မာ သဘောထားကြီး စိတ်ရှည်တဲ့လူကို ပြောတာ''
"ဟွင်းး... အာ့ဆိုရင်တော့ ယူမယ် စပ်ပေး''
အလုပ်ထဲက အင်ဂျင်နီယာပေါက်စတွေရဲ့ ဖုန်းနံပတ်တွေ တန်းစီပြီး ပေးထားခဲ့တယ်၊၊
ပြန်မယ်လုပ်တော့မှ ကလေးမက မေးတယ်... ....
"ဦးက နှံ့စပ်တဲ့သူဆိုတော့ အကြံပေးခဲ့အုံး''
"အင်း... ပြော ဘာလဲ''
"ဟိုလေ... ဟွာလေ... ညိုတဲ့ဟာလေ အာ့လေ ပြန်ဖြူအောင် ဘာလုပ်ရမလဲငင်...''
"L'OREAL က Day cream, night cream လိမ်းပေါ့အေ့၊ ဖြူပြီး ညက်လာလိမ့်မယ်''
"ဟွန့်... တခြားမြန်မြန်ဖြူတဲ့နည်း မရှိဘူးလား''
"အာ့ဆိုလည်း ဖင်ကို ပေါင်းတင်အေ...''
"ငင်... ဘယ်ဆိုင်က တင်ပေးမှာလဲ ဦးရယ်''
"ဈေးပိုပေးပြီး ညှိကြည့်ပေါ့ ရမှာပါ''
"ရတယ်ပဲထား... စဉ်းစားကြည့်မိတယ်၊ ထိုင်ခုံပေါ်တက် ဖင်ဗူးတောင်းထောင်ထားတာကို ပေါင်းတင်တဲ့ အုပ်ဆောင်းကြီးနဲ့ အုပ်၊ ညောင်းကညောင်း ပူကပူ၊ လူမြင်လို့လည်း မကောင်း၊ အမလေး တော်ပြီတော်ပြီ ဖင်မဲလို့ ကြိုက်မယ့်သူမရှိလည်း အပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်''
"ဟား... ဟား... သွားပြီအေ၊ ငါ ဖင်ပေါင်းတင်တဲ့ဆိုင်ဖွင့်ရင် လာ အားပေးအုံး''
#သန်၎ကို - #ပေါက်ကရ၄၀
မန်တလေးသူတှေ ဖငျကွား ညိုလို့..စိတျမဆိုးတတျမှ အပွညျ့အစုံဖတျကွညျ့နျော..
ရဘူးနျော . . . .ချချချ( စာရေးတဲ့သူ ပေါကျပေါကျရှာရှာတှေးတတျပုံမြား)
"ဖငျကွားညို ပွဿ နာ"
ဒီရကျပိုငျးက ပွဿ ဒါးလှတျပုံ မရဘူး။
ဘာစာရေးရေး နောကျဆကျတှဲ ပွဿ နာလေးတှနေဲ့။
'မန်တလေးသူ ဖငျကွားညို'... လို့။
အဲ့ဒါကိုဗြာ မန်တလေးသူ သူငယျခငျြးတဈယောကျက ဖုနျးဆကျပွီး ရနျလုပျတယျ... ...
"ဦးသနျရာ... မန်တလေးသူဖငျကွားညိုလို့တော့ သိမျးကွုံးမပွောသငျ့ပါဘူးဗြာ"
"ဟာ... သိမျးကွုံးမပွောမိပါဘူး၊ ကိုယျ့လူကိုယျ ပွောတာပါ''
"ကဲ ဒါဆို ငါမေးမယျ၊ ကွမျးပွငျပျေါ တငျပွငျခှပွေီး အကွာကွီးထိုငျရငျ ခွမေကျြစတှေ့ေ ဘာဖွဈတတျလဲ ဖွေ''
"ညို မဲ လာတာပေါ့ဗြ'''
"အေး... နောကျတခုမေးမယျ၊ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဒူး ခဏခဏထောကျရတဲ့သူတှရေဲ့ ဒူးက ကွာလာရငျ ဘာဖွဈမလဲ''
"ဟုတျပွီ... ထပျမေးမယျ၊ တခြို့မိနျးကလေးတှေ ခွဖေနောငျ့ အထကျနားမှာ ဘာလို့ မဲမဲအကှကျလေး ဖွဈနတောလဲ''
"သူ့ ကွိုးသိုငျးဖိနပျက ကွိုးနဲ့ ပှတျမိလို့ပေါ့ဗြ''
"မှနျတာပေါ့... ကဲ မွနျမာပွညျမှာ မန်တလေးက စကျဘီး ဆိုငျကယျ အမြားဆုံး စီးတယျဆိုရငျ နငျ ငွငျးမလား''
"အာ့ဆို... စကျဘီးထိုငျခုံနဲ့ အမွဲပှတျတိုကျနတေဲ့ ဒို့ မနျးသူမနျးသားတှရေဲ့ ဖငျကွားမှ မညိုရငျ ဘယျသူညိုမလဲ ကဲ''
"ဟာဗြာ... မသိဘူးဗြာ... ဘယျသူညိုညို ကနြျောမညိုဘူးဗြာ... '
"ညညျး သခြောလို့လား အေ့''
"သခြောတယျဗြာ... ခငျဗြားကွီး လူယုတျမာကွီး၊ အကုနျလြှောကျစဉျးစာနတော၊ တောကျဈ... မမွငျဖူးဘဲနဲ့ကို မှနျအောငျ ပွောနိုငျတာ၊ ရှကျတယျ ရှကျတယျ ဟငျ့ ဟငျ့''
အဲ့ကလေးမလညျး ဖငျကွားညိုကိစ်စကွောငျ့ လောကီကို စိတျကုနျပွီး သီလရှငျ ဝတျသှားရှာတယျ
တရကျက ဘယျခွထေောကျ အရမျးကိုကျနလေို့ ရုံးလဈပွီး ထိုငျးမာဆတျမှာ သှားအနှိပျခံတယျ။
ကိုယျ့နှိပျပေးတဲ့ မိနျးကလေးက ကိုယျ့ကို သိနတေယျ... ....
"ဦးက ဦးသနျ၎ကို မလား''
"သမီးနဲ့က ဖစျေ့ဘုတျမှာ ဖရနျ့လေ''
""အျော... အေး အေး...၊ ငါ ဒီကိုလာတယျလို့တော့ ပို့ဈမတငျနဲ့နျော''
"ဟုတျကဲ့ပါ... ဦးတို့က ဘာလို့ခုထိ မယူသေးတာလဲ''
"သူက သူ့အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ ရှုပျနတောလေ၊ သူ အကယျဒမီမရခငျ လကျမထပျခငျြသေးဘူးဆိုလို့ စောငျ့နရေတာ''
"အျော... ဦး ခဈြသူက ရုပျရှငျမငျးသမီးပေါ့''
"ဖှီးဈဈ... အဟုတျမှတျလို့ နားထောငျနတော၊ အနောကျသနျတယျ ဦးက''
"ဒါနဲ့ ဦးကို ကွုံလို့ မေးအုံးမယျ"
"မန်တလေးသူတှကေ ဘာလို့ ဖငျကွားညိုတာလဲဟငျ..."
အငျး... ဒီကိစ်စက မပွီးသေးပါလား ဒုက်ခပါပဲ
ဟိုနကေ့ မယျသီလရှငျ ဝတျသှားတဲ့ ကလေးမကို ရှငျးပွသလိုပဲ သူ့ကို ရှငျးပွလိုကျတယျ။
"... ... အဲ့လို စကျဘီး ဆိုငျကယျ စီးတာမြားလို့ ညိုတာအေ့၊ မဟုတျပါဘူးငွငျးရငျ ညာတာ''
"အငျး... အဲ... ဦးကလညျး ရှကျစရာကွီး''
"ရှကျစရာ မဟုတျပါဘူး၊ ဒါ သဘာဝပါ၊ ဒါနဲ့ ညညျးကရော ဘယျမွို့ကလညျး''
"ဘယျမွို့ကလညျး မေးတာအေ့၊ ညညျးကို လမျးလြှောကျသလား စကျဘီးဆိုငျကယျ စီးသလား မေးနတောမဟုတျဘူး''
"သမီးမွို့ကိုသိရငျ သမီးစကျဘီးဆိုငျကယျ စီးတာ သိမှာပေါ့၊ အာ့ဆို ဦးက သမီးကို သမီးကို ဟိုဒငျးညိုတယျလို့ တှေးနမှော..''
"ခကျဖူးလား၊ ညညျးဟာက အန်တရာယျကို ကွိုမွငျလိုကျပုံမြား ဟိုပုံပွငျထဲက သားဖှားမီးယပျ ဆရာဝနျကွီးနဲ့ သူ့နပျဈမလေးလို ဖွဈနပွေီ''
ဒါနဲ့ သူ့ကို ပုံပွငျပွောပွရတယျ။
ကွားဖူးနားဝပါ ဘယျသူက မူရငျးလဲတော့ မသိတော့ပါဘူး။
တခါက သားဖှားမီးယပျအထူးကု ဆရာဝနျကွီးတဈယောကျ ရှိသတဲ့။
မှေးလူနာတှေ ကလေးမှေးပွီးရငျ မိနျးမကိုယျ မှေးလမျးကွောငျးကို ပွနျခြုပျတဲ့အခါတိုငျး... ဆရာဝနျကွီးက ထမကွညျ့ဘဲနဲ့ သူ့နပျဈမလေးကို ခိုငျးသတဲ့... ..
"ဆရာမရေ... နံပတျ ၁ မှေးလူနာကို ၃ ခကျြ ခြုပျလိုကျပါ''
"ဆရာမရေ... နံပတျ ၂ မှေးလူနာကို ၂ ခကျြပဲ ခြုပျပါ''
"ဆရာမရေ... နံပတျ ၃ မှေးလူနာကိုတော့ ၆ ခကျြ ခြုပျပါ''
ဒါနဲ့ နပျဈမလေးက မေးတယျ... ...
"ဆရာရယျ... မှေးလူနာကို ထတောငျမကွညျ့ဘဲနဲ့ ဘယျနှခကျြခြုပျပါလို့ ဆရာကပွောတယျ၊ ပွောတဲ့အတိုငျး ကမြခြုပျလိုကျတာ ကှကျတိခညျြးပါပဲ၊ ဘယျနှခကျြခြုပျ ရမယျဆိုတာကို ဆရာ ဘယျလိုမြား သိလဲဟငျ...''
"လှယျပါတယျ ဆရာမရယျ... သူ့ပါးစပျကို ကွညျ့ပွီးပွောတာပါ၊ တိုကျရိုကျအခြိုးတူတယျ ဆရာမရဲ့''
ဆရာမလေးခမြား ရှကျကိုးရှကျကနျးနဲ့ နူတျခမျးကိုခြှနျ ပါးစပျကိုစိပွီး ပွောသတဲ့... ....
"ဟှနျ့... ခရြာကရဲ... ဟုရဲဟုပဲနဲ့''
ဆရာမလေးက နူတျခမျးထူထူကလေးနဲ့ ဆိုကိုး...
"ဟီး... ဟီး... ဦးကလေ... တကယျပဲတေျာ့''
"ညညျးလညျး ကလေးမှေးရငျ အဲ့ဆရာဝနျဆီ မသှားနဲ့''
"အမလေး... ကလေးမှေးဖို့မပွောနဲ့ ရညျးစားတောငျ မရှိသေးဘူး''
"တကယျပွောတာ... ဦး တပညျ့တှထေဲက ခြောထောတျော ရှိရငျ စပျပေးအုံး''
"ဦးကလညျး ပိနျးလိုကျတာ၊ ရုပျခြော ငှထေော ပညာတျော တဲ့လူလေ''
"အျော... အဲ့လို ခြောထောတျောတော့ မရှိဘူး... မာ၊ ကွီး၊ ရှညျ တှတေော့ ရှိတယျ ယူမလား''
"ဟငျ့... ကွောကျစရာကွီး မယူုခငျြပါဘူး''
"ဟဲ့... လိမျမာ သဘောထားကွီး စိတျရှညျတဲ့လူကို ပွောတာ''
"ဟှငျးး... အာ့ဆိုရငျတော့ ယူမယျ စပျပေး''
အလုပျထဲက အငျဂငျြနီယာပေါကျစတှရေဲ့ ဖုနျးနံပတျတှေ တနျးစီပွီး ပေးထားခဲ့တယျ၊၊
ပွနျမယျလုပျတော့မှ ကလေးမက မေးတယျ... ....
"ဦးက နှံ့စပျတဲ့သူဆိုတော့ အကွံပေးခဲ့အုံး''
"အငျး... ပွော ဘာလဲ''
"ဟိုလေ... ဟှာလေ... ညိုတဲ့ဟာလေ အာ့လေ ပွနျဖွူအောငျ ဘာလုပျရမလဲငငျ...''
"L'OREAL က Day cream, night cream လိမျးပေါ့အေ့၊ ဖွူပွီး ညကျလာလိမျ့မယျ''
"ဟှနျ့... တခွားမွနျမွနျဖွူတဲ့နညျး မရှိဘူးလား''
"အာ့ဆိုလညျး ဖငျကို ပေါငျးတငျအေ...''
"ငငျ... ဘယျဆိုငျက တငျပေးမှာလဲ ဦးရယျ''
"စြေးပိုပေးပွီး ညှိကွညျ့ပေါ့ ရမှာပါ''
"ရတယျပဲထား... စဉျးစားကွညျ့မိတယျ၊ ထိုငျခုံပျေါတကျ ဖငျဗူးတောငျးထောငျထားတာကို ပေါငျးတငျတဲ့ အုပျဆောငျးကွီးနဲ့ အုပျ၊ ညောငျးကညောငျး ပူကပူ၊ လူမွငျလို့လညျး မကောငျး၊ အမလေး တျောပွီတျောပွီ ဖငျမဲလို့ ကွိုကျမယျ့သူမရှိလညျး အပြိုကွီးပဲ လုပျတော့မယျ''
"ဟား... ဟား... သှားပွီအေ၊ ငါ ဖငျပေါငျးတငျတဲ့ဆိုငျဖှငျ့ရငျ လာ အားပေးအုံး''
#သနျ၎ကို - #ပေါကျကရ၄၀